Mi Imbwa Yekutungamira
Encyclopedia yeVaridzi Vembwa
Zvakanaka here kupa mbwanana kure?
Category: Kugadziriswa nekutarisira 0
Kana iwe ukapa mbwanana kure pamberi pemasvondo masere, unomhanya mukana wechinhu chisina kunaka usati wapedza kurumura zvizere. Zvimirire uye gadzira…
Ko mapfupa eyak akachengeteka kune imbwa here?
Imbwa dzinogona kudya yak chews here? Yakazara digestible: Raw-makanda ane mukurumbira akaipa kumatumbu embwa. Zvimedu zvinogona kuiswa munzvimbo yavo yekugaya, pamusoro pekugadzira yako furry…
Iwe unowedzera sei mazinga esimbi muimbwa?
Ndeipi sosi yakanaka yesimbi kune imbwa? Kunyange imbwa dzakagwinya dzinowanzo gamuchira simbi dzese dzavanoda kubva kuibble yavo, zvimwe zvekudya zvakakwirira mu…
Ndeapi mashopu ayo imbwa dzinobvumidzwa muUK?
Imbwa dzinogona kuenda muzvitoro UK here? Kupesana nekutenda, hapana mutemo unotadzisa imbwa kupinda muzvitoro, mabhangi kana mabhizinesi emuno; saka zvinonyanya kutsamira…
Purina anogadzira Pedigree imbwa chikafu here?
Pedigree naPurina zvese zviri zviviri zvigadzirwa zvakavimbika zviri muchikamu chekudya kwemhuka. Asi kana fananidzo ichiitirwa Pedigree vs Purina, Purina ane…
Mubvunzo: Imbwa dzemusango dzinogona kudzidziswa dzimba?
Chokwadi # 1: Kusiyana nembwa dzinochengetwa, imbwa dzesango dzine makumbo marefu, zvigunwe zvina kumakumbo avo epamberi uye nzeve dzakakura dzakakomberedzwa. Kunyangwe zvese zvipenyu zvakabva mumhumhi, zviri…
Iwe kangani uchifanira kufudza iyo svikiro saizi imbwa?
Unogona kudyisa imbwa yako kamwe kana kaviri pazuva. Zvakanakisa kuzviita kaviri zuva nezuva pa8-12 awa nguva. Kana uri kuzviita nenzira iyi,…
Matoyi anonhuwirira akaipa kune imbwa here?
Sezvambotaurwa pamusoro apa, phthalates iboka remakemikari ane chepfu. Ivo ndivo vanowedzera izvo zvinoita kuti PVC peturu matoyi achinjike uye achikoka imbwa kuzohwa. Phthalates inonhuwirira kunge…
Pindura nekukurumidza: Vangani vanofamba nembwa vanoita UK?
Icho chiri chokwadi chaicho ndechekuti imbwa inofamba ichichaja £ 11.50 pa imbwa, paawa, uye kuita 197 imbwa-inofamba pamwedzi, inogona kuenzana neyazvino UK median muhoro…
Inguva yakareba sei imbwa yadya vanogona kuenda kunofamba?
Edza kusarega pooch yako ichikurumidza mhumhi pasi yake / chikafu chayo! Usarega imbwa ichitamba kana kurovedza muviri (semuenzaniso enda kunofamba) kweanenge maviri…
1 2 ... 1,524 Next
Mhoro, zita rangu ndinonzi Peter. Mune yangu blog iwe unowana ese akakosha ruzivo nezve imbwa - mhando, kurera, kutarisira, zvombo, zvinonakidza chokwadi, nezvimwe.
Iwe wakabvunza: Imbwa yeChivavarira ichiri kurarama here?
Kazhinji mibvunzo: Chii chinoitika kana imbwa yangu ikaruma datya?
Mubvunzo wako: Sei imbwa dzinovenga mafeni?
Mhinduro yakanyanya kunaka: Zvakajairika here kuti imbwa yangu igare iine nzara?
Pindura nekukurumidza: Chii chinokonzeresa pitbull kurwisa?
Ko kana imbwa yangu ikadya Zyrtec?
Ko mitsipa yehuku yakanaka kune mbwanana here?
© 2021 Mi Imbwa Yekutungamira
KUTARISIRA VABATI VAKARUDZIRA! Zvese zvishandiso zvakatumirwa pane saiti ndezve kungoitira zvekudzidzisa uye zvekudzidzisa zvinangwa! Kana iwe uchidavira kuti kutumirwa kwechinhu chero chipi zvacho kunotyora kodzero yako, iva nechokwadi chekutibata nesu kuburikidza nefomu rekubatana uye zvinhu zvako zvichabviswa!